टिका सानुलाई कस्ले के भन्यो ? धरधरी रुँदै आइन् मिडियामा, अन्तर्वार्तामा रोकिएन टिकाको आशु (भिडियो) « Etajakhabar
टिका सानुलाई कस्ले के भन्यो ? धरधरी रुँदै आइन् मिडियामा, अन्तर्वार्तामा रोकिएन टिकाको आशु (भिडियो)
प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७६, आईतवार १४:१५
गीत संगीतका क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरुका लागि यो वर्ष सायद नराम्रो बर्षका रुपमा रह्यो भन्दा पनि फरक नपर्ला । गीत चर्चित हुनासाथ गायकहरु विवादमा आउन थालेका छन् । गलबन्दी बोलको गीतवाट सुरु भएको यो शिलशिला अहिले टीका सानु सम्म आइपुगेको छ । सम्झना भण्डारीको गीतलाई टीका सानुले गाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै टीका टिप्पणी गरिएको छ । त्यस्तो टिप्पणीवाट चिन्तित भएकी टीकाले कार्यक्रम इन्द्रेणी समाजमा आएर आफ्नो वास्तविकता बताएकी छन् । उनले आफुले जानेर नभई अरुले गीत गाइदिनुस् भनेर गाएको बताएकी छन् । उनले आफु काठमाडौं आएको दुई वर्ष भए पनि गीत संगीतमा लागेका १० वर्ष भएको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा निकै नराम्रा कमेन्टहरु देखेर आफुलाई निकै दुख लागेको बताएकी टीकाले कार्यक्रम प्रस्तोतासंग कुरा राख्दा निकै भावुक भएकी थिइन् ।
तिज गीत गाएकी टीका सानुको सो गीत ट्रेण्डिगंमा आएको छ । तीज गीत ट्रेण्डिगंमा आएको यो पहिलो पटक हो । लाइभ दोहोरी साँझमा पनि टीका सानु निकै स्थापित छन् । श्याम कडेलले आफुलाई गीत गाउन लगाएको उनले बताइन् । श्यामले सम्झना भण्डारीको गीतमा कोरश भोकल हाल्न आग्रह गर्दा उनले आफ्नो श्वर मिल्दैन भन्दा पनि नमाने पछि कोरश गाएको बताइन् । यहि तिज हो नाच्ने र गाउँने व्रत बस्ने शिवजी पोइ पाउने नामको गीत गाएको उनले बताइन् ।
उनलाई फेरी कलंकीमा सोही गीतको लिप्सिगं गर्न पनि बोलाएको पनि बताइन् । श्याम कडेलले र आफुले गाएको गीतमा मात्र लिप्सिगं दिएपछि सम्झना लिप्सिगंको लागि आइनन् तपाईको कोरशमा पनि आवाज छ त्यसैले तपाईले नै गरिदिनु भनेर आग्रह गरेको उनले बताइन् । श्याम कडेलले गरेको सो आग्रह नकार्न नसक्दा आफु समस्यामा परेको बताइन् । तर गीत सार्वजनिक हुँदा आफ्नो नाम प्राथमिकतामा राखेको आफुले थाहा नपाएको बताइन् । आफुले कोरश मात्र गरेका कारण गीतलाई त्यती ध्यान नदिएको उनले बताइन् । आफुले नखाएको विष लागेको बताइन् । उनले आफ्नो नाम एल्बममा राख्नु भनेर कसैलाई नभनेको बताइन् । लिप्सिगं पनि अहिले गीतमा आफ्नो कतै नभएको बताइन् ।
२५ असार २०७७, बिहीबार २१:०२